UCL: Kooxaha Ingiriiska oo sameeyey rikoor ay ugu dambeysay muddo 10 sanadood ah – Gool FM
UCL: Kooxaha Ingiriiska oo sameeyey rikoor ay ugu dambeysay muddo 10 sanadood ah
(England) 14 Maarso 2019. Kooxaha Ingiriiska ayaa sameeyey rikoor ay ugu dambeysay muddo 10 sanadood ah kaddib markii afar ka mid ah kooxaha UK ay u soo gudbeen wareegga siddeed dhammaadka Champions League.
Kooxaha reer England ee Manchester United, Tottenham Hotspur, Manchester City iyo Liverpool ayaa iska xaadiriyey siddeed dhammaadka Koobka Horyaalladda Yurub, waxaana ay sugi doonaan kooxihii ay ku aadi lahaayeen berri oo Jimco ah marka la sameynayo isku aadka.
Waa markii ugu horreysay tan iyo xilli ciyaareedkii 2008/09 oo afar kooxood oo ka socda Dalka Ingiriiska ay gaaraan siddeed dhammaadka Koobka Horyaalladda Yurub ee Champions League.
Xilli ciyaareedkaas 2008/09 waxaa siddeed dhammaadka Champions League wada gaaray afarta kooxood ee reer England oo kala ah, Arsenal, Chelsea, Man United iyo Liverpool.
Tani waa markii ugu horreysay oo muddo 10 sanadood ah oo afar kooxood oo Ingiriis ah ay wada gaaraan wareegga siddeeda UefaChampions League.
Muxuu ka yiri Valverde suurtaganimada ay kaga hor imaan karaan Cristiano Ronaldo???
"Qof walba wuxuu filanayaa hoos u dhaca qaab ciyaareedka Cristiano Ronaldo, laakiin……”